ABSDF - ISP Myanmar Peace Desk
ဥက္ကဋ္ဌ ရဲဘော်သံခဲ (JICM တွင် ပါဝင်)
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးဝင်း (UPDJC တွင် ပါဝင်)
ဆလိုင်းယောအောင် (JMC တွင် ပါဝင်)
တည်ထောင်သည့်ရက်စွဲ – ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်
ဌာနချုပ် – KNU ထိန်းချုပ်ဧရိယာ
လှုပ်ရှားဧရိယာ – KIA နှင့် KNU ထိန်းချုပ်ဒေသများ
ခေါင်းဆောင် – ဦးသံခဲ(ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးမျိုးဝင်း(ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ)
၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ ဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက် ထောင်ပေါင်း များစွာ သော ကျောင်းသားများ၊ အလုပ်သမားများ၊ လယ်သမားများနှင့် လူငယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ် အသီးသီးသို့ ထွက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး All Burma Students’ Democratic Front (ABSDF) ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ညီလာခံများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြု ပြဌာန်းကာ ၎င်းနှင့်အညီ တပ်ဦးကို ရှေ့ဆောင်၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်တွင် ပြုလုပ်သော တတိယအကြိမ် ညီလာခံအပြီးတွင် နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားခဲ့ရသည်။ နှစ်ဖွဲ့စလုံး သည် တတိယအကြိမ် ညီလာခံ၌ အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ဆက်လက် လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။
ကွဲသွားသည့် နှစ်ဖွဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ညီလာခံကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ပြုလုပ်ရာ၌ ကွဲကွာ နေစဉ် ကာလအတွင်း နှစ်ဖွဲ့စလုံးက လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ နှစ်ခုကို အခြေခံ၍ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်မှုများ ပြုလုပ်ကာ တစ်ခုတည်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြု ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ပြုလုပ်သော ပဉ္စမအကြိမ်ညီလာခံ၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်၂၃ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ဆဌမအကြိမ် ညီလာခံ၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေ ၂၃ ရက်မှ ဇွန် ၈ ရက်အထိ ပြုလုပ်သော သတ္တမအကြိမ် ညီလာခံ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော အဌမ အကြိမ်ညီလာခံနှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်မှ ၁၉ ရက်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော နဝမအကြိမ်ညီလာခံ အသီးသီးတို့၌ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ချက်များ ထပ်မံပြုလုပ်ကာ အတည်ပြု ပြဌာန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကို ဌာနချုပ် ဒေါင်းတမန် စခန်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ညီလာခံ သက်တမ်း ဗဟိုကော်မတီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယခုအခါ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်နှင့် ဦးတည်ချက် (၄) ရပ်
ABSDF သည် အောက်ပါဦးတည်ချက်များကို ထမြောက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဆိုထားသည်။
(က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူလုထုတရပ်လုံး စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှ လွှတ်မြောက်ရေး။
(ခ) ဒီမိုကရေစီနှင့် လူအခွင့်အရေးရရှိရေး
(ဃ) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး
ABSDF ၏ ဗဟိုကော်မတီစာရင်း
၁. ရဲဘော် သံခဲ (ဥက္ကဌ)
၂. ရဲဘော် မျိုးဝင်း (ဒုတိယ ဥက္ကဌ)
၃. ရဲဘော် ဆိုနီမဟန်ဒရာ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး)
၄. ရဲဘော် မြင့်ဦး (အတွင်းရေးမှုး ၁)
၅. ရဲဘော် ရဲထွဋ် (ခ) လှဌေး (အတွင်းရေးမှုး ၂)
၆. ရဲဘော်လွမ်းနီ (ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်)
၇. ရဲဘော်မိဆူးပွင်း (ခ) မလေးလုံ (ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်)
၈. ရဲဘော်မောင်ဦး (ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်)
၉. ရဲဘော် ဆလိုင်းယောအောင် (ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်)
၁၀. ရဲဘော် ချစ်ဝင်း (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၁. ရဲဘော်ကျော်လင်း (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၂. ရဲဘော် သူရ (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၃. ရဲဘော် စိုးထွဋ် (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၄. ရဲဘော် မင်းဌေး (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၅ . ရဲဘော် သန့်ရှိန်မြင့် (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၆ . ရဲဘော် ရန်နိုင်စိုး (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၇. ရဲဘော် ဝင်းတင့်ဟန် (ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၈. ရဲဘော် သိန်းလွင် (အရံ ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၁၉. ရဲဘော်ရီထွန်း(အရံ ဗဟိုကော်မတီဝင်)
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင် အစိုးရနှင့် NCA လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးနောက် ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့ပါ။
ABSDF သည် NCA လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST(Peace Process Steering Team)တွင် ပါဝင်သည်။
၁ – မြဝတီ
၂ – မူဆယ်
၃- လွိုင်ကော်၊ ကလေး၊ ဘုရားသုံးဆူ၊ မြိတ်
Facebook – https://www.facebook.com/theabsdf/
Phone – ကျောင်းသားတပ်မတော် ပြန်ကြားရေးဌာန – 0873071501